I-Apple AirPods Pro vs AirPods 2 - Uyini Umehluko? - Izesekeli
I-Apple yethule i-AirPods Pro ngama-tweaks abalulekile. Le nkampani ikhombisa ukuthi ayesabi ukwenza ukuthuthukiswa okuhehayo ukuhlinzeka ngezesekeli ezisezingeni eliphakeme kubathengi babo. Kodwa-ke, ukwethulwa kwe-AirPods entsha kuletha ukusebenza kwe-Apple AirPods 2 okukhulunywa ngayo.
Noma ngabe ungumsebenzisi omusha we-Apple noma iklayenti elivele likhona, ungahle uzibuze ukuthi ngabe i-AirPods Pro ikufanele yini ukutshalwa kwemali hhayi. Lapha uzothola ukuqhathanisa nomehluko ophelele. Njengoba kunomehluko wentengo osobala, lo mbhalo ngeke uwuthathe njengesici.
Cabanga ngokufunda Ungayibona Kanjani i-Fake AirPods Pro?
I-Apple AirPods Pro vs AirPods 2 - Ukufana
Ake siqale ngokukhuluma ngokufana phakathi kwama-AirPod amabili avela ku-Apple.
I-Apple AirPods 2 ne-Pro zombili zisebenzisa izinketho zokuxhuma zakamuva zokuxhumana okungenamthungo. Uthola ukusebenza okungasontekile nokusebenza komsindo okhukhulayo. Ngokuxhuma, akukaze kube khona i-tweak ebuhleni. Bagcina imfuneko yesikhathi esifanayo nokuxhuma okungenakuphikiswa kwamadivayisi we-Apple.
2.Izilawuli Zokuthinta Nezwi
Bobabili basekela umsizi wezwi likaSiri ngokuhlangenwe nakho okungenazandla. Ngokufanayo, kufanele usebenzise iSiri kuwo womabili la ma-AirPod wokulawula ivolumu. Ukwamukela noma ukwenqaba izingcingo kukhululekile. Ungakwazi ngisho ukweqa ithrekhi noma ume isikhashana bese udlala umculo ngokuya ngemfuneko yakho. Ngaphezu kwalokho, i-AirPods Pro ikuvumela ukuthi wenze ukukhanselwa komsindo ngokuthinta, futhi.
3.I-Battery Life & Amacala Okushaja
Impilo yebhethri yakho kokubili lokhu icishe ifane. Ufika emahoreni ama-5 wokudlala ama-AirPods 2 ngenkathi iPro imi emahoreni angu-4.5. Kodwa-ke, ungakhuphula impilo yebhethri likaPro uma ungasebenzi ukukhanselwa komsindo, ngakho-ke lokho kuhlanganisa. Uma ungakucabangi lokho, womabili acishe afane.
I-AirPods Pro ne-AirPods 2 zinecala lokushaja elinikela ngamahora angama-24 empilo yebhethri nokushaja. Noma kunjalo, i-AirPods Pro itholakala kuphela ngokushaja okungenantambo. Okwamanje, i-AirPods 2 iyatholakala ngokushaja kwamacala okujwayelekile nokushaja okungenantambo okudinga utshalomali olwengeziwe.
Yini Okuhlukile Phakathi Kwe-AirPods 2 Ne-AirPods Pro?
I-Apple isibonile isidingo somsebenzisi kanye nokwanda okwandayo kwama-headphone okukhansela umsindo. Ngakho-ke, bethule i-AirPods Pro yabo ngobuchwepheshe beNoise Cancellation. Lobu buchwepheshe abutholakali ku-Apple AirPods 2. Ngakho-ke, buqinisa kakhulu ukusebenza konke nokuheha kwe-AirPods Pro.
1. Amandla Okukhansela Umsindo
Ukukhanselwa komsindo kwehlukile futhi kukunikeza ukuzijabulisa okungcono ngama-AirPods. Isebenza ngamaround angama-200 aphawulekayo ngomzuzu. Ngakho-ke, yehlisa umsindo osendaweni ezungezile ukukulethela izinketho zokulalela ezinganqamuki.
Ku-AirPods 2, kufanele uthembele ekunciphiseni nasekunciphiseni umsindo ngokuxhunywa kwabo ngama-AirPod nganoma yiluphi uhlobo lokususa umsindo. Okubaluleke kakhulu, ukukhanselwa komsindo kwe-AirPods Pro akuzizwa kuphazamisa, futhi akwenzi noma yikuphi ukuphazamiseka ngemuva amanye ama-earphone nama-headphone aziwa ukuthi ahlinzeka.
Imodi Yokubonisa Ngale
Uma ungafuni ukuvimbela ukukhanselwa komsindo kodwa ufuna ukwazi indawo okuyo, i-AirPods Pro ine- indlela yokubonisa ngale . Ikugcina wazi umsindo ozungezile futhi yenza kube lula kuwe ukugijima, ukujikeleza, noma ukuhamba ngenkathi ugqoke i-AirPods Pro.
3. Kwehliswe Ukucindezela Komoya
Idizayini ye-AirPods Pro iyenza inikeze ukukhanselwa komsindo okunethezekile. Imisindo eminingi ekhansela izindlebe noma amahedfoni aziwa ngokufaka ukudlidliza. Kwesinye isikhathi kunikeza ukuzwa okusindayo ezindlebeni, kube sengathi kukhona ukucindezela okwakhekayo.
Kodwa-ke, nge-Apple AirPods pro, unomoya omncane ofanele womoya kanye nesipiliyoni esingenamthungo. Ngeke uze uzwe ukuthi ukukhanselwa komsindo kusebenze.
Kuthiwani Uma Siphelisa Ukukhanselwa Komsindo?
Ngabe i-AirPods Pro inikela nganoma yini enye ngaphandle kokukhanselwa komsindo? Umbuzo osebenzayo. Kuthiwani uma ususa ikhono layo lokukhansela umsindo? Ngabe i-Apple AirPods Pro ikufanele ukutshalwa kwemali? Ake sibone ukuthi ikuphi:
Izinketho Ezingcono Zokulinganisa -
I-AirPods 2 iza nokulingana okujwayelekile ‘kwendawo yonke,’ okungafanelekile ngokujwayelekile kuwo wonke umuntu. Abantu abanosayizi wezindlebe ohlukahlukene banenkinga ngama-AirPods 2. Ngokuqinisekile iqeda inketho yokuzisebenzisa emsebenzini noma ejimini njengoba ungalahlekelwa yizo.
I-Apple AirPods Pro iza ngobukhulu obuhlukahlukene bokusonga kwayo abicah. Ngakho-ke, ungathola ukukhishwa okukufanele kangcono. Kwenza i-AirPods Pro ifanele ukugqoka ejimini noma ukugijima ngaphandle kokwesaba ukuyilahla.
Ukumelana ne-IPX -
Ukukhuluma ngokusebenza kweGym, i-AirPods Pro iza nokumelana ne-IPX, engatholakali kuma-AirPods 2. Kubukeka sengathi i-Apple isebenza ukuvimba imikhiqizo yayo. Ungabona ukuzilibazisa okufanayo ochungechungeni lwe-Apple 12 ye-Apple.
Yize ingavimbeli ngokuphelele amanzi, yenza i-AirPods Pro imelane kakhulu nokuvezwa kwamanzi nezithukuthuku. Ukungcola nothuli nakho kuzoba nesikhathi esinzima ngokwedlulele ukwehlisa ikhwalithi yomsindo. Lesi esinye isici lapho i-AirPods Pro idlula khona.
Ukusebenza Komsindo Okungcono -
I-AirPods 2 isebenza ngokunikela ngokukhipha umsindo okuthuthukisiwe kokusebenza okukhulu. Isebenzisa ama-bass okufakelwa kanye ne-treble boost. Ngakho-ke, i-audiophile ingabona uhlobo oluthile lokukhanya. Manje, i-AirPods Pro ayisiwona amaphayona asezingeni elizwakalayo, kepha ebangeni lentengo, banikeza abancintisana nabo inselelo enzima yemali.
Hhayi nje i-AirPods 2, i-AirPods Pro idlula amanye ama-earphone amaningi aphezulu nezindlebe ezitholakala kuleli banga lentengo. Inikeza ukusebenza komsindo okuhamba phambili ngokucacile okukhulu. Ukusebenza komsindo webanga eliphakathi, kuyamangalisa. Uthola ama-bass angcono futhi emvelo ngokucacela okwengeziwe nokuhlangenwe nakho okuhle kakhulu.
Inikeza ikhwalithi yomsindo wencazelo ephezulu ebabazekayo futhi ngokungangabazeki efanelekile ukuthwala izimpawu zekhwalithi ye-Apple. Uma ukubhanqa ngokukhanselwa komsindo, ngokungangabazeki kufanelekile ukuthola i-AirPods Pro.
Ekugcineni, nge-Apple AirPods 2 ne-AirPods Pro, uthola lokho okukhokhelayo. Kunomehluko omkhulu phakathi kwentengo yezinketho ezimbili. Uma ufuna ama-AirPods alungele iSabelomali enza umsebenzi wenziwe, i-AirPods 2 ingukutshalwa kwezimali okusimeme.
Okwamanje, uma ufuna ukucaciswa okwengeziwe nokukhanselwa komsindo, lapho-ke ekilasini layo, i-AirPods Pro ingaba ngcono kakhulu. Noma kunjalo, kufanele ukhumbule ukuthi lezi ziyahambisana namadivayisi we-Apple. Kukhona enye inzuzo yokuthola i-AirPods Pro. Izotholakala ngemibala ehlukahlukene futhi ehehayo yabasebenzisi.
I-TamilRockers (2020) - Ingabe le Webhusayithi Entsha Iphephile Ukuyisebenzisa?
Ingabe i-Youtube iphansi? Hlola Isimo Esibukhoma Njengamanje
ungayithola kanjani imiyalezo ye-instagram ku-pc
isakaza kusuka kukhompyutha iye ku-chromecast
landa ama-movie wama-cinema wamahhala online
ama-movie wamahhala ngesi-Spanish latin
bukela i-hd movie online mahhala ngaphandle kokulanda
imidlalo engavinjelwe ukudlala esikoleni
Ikhodi yephutha lesipiliyoni se-nvidia geforce 0x0003